Duqeynta Somaliya: Obama vs Trump? – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 10 bilood haya xilka Madaxweynaha Dalkaas Mareykanka,waxaana uu ku dhow yahay in uu bar barreeyo Weerarrada Mareykanka ee ka dhacay Soomaaliya 8dii Sano ee uu Madaxweynaha ahaa Brack Obama.
Intii uu Madaxweynaha ahaa Obama waxaa uu amray 34 Weerar oo Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ay ka fuliyeen Soomaaliya.
Donald Trump,ayaa amray 30 Weerar oo uu Mareykanka ka fuliyay Soomaaliya 10ka bilood ee ugu horreysa xilka Madaxweynenimada Mareykanka.
Mareykanka ayaa Isniintii la soo dhaafay sheegay in 100 ka mid ah Al-shabab oo ku dilay Saldhig ay ku tababaranayeen oo ku yaalla Gobolka Baay,sidoo kale weerarkii ugu dambeeyay ee dhinaca cirka ah ee uu mareykanka ka geysto Soomaaliya waxaa uu ahaa midkii xalay uu ka geystay Gobolka Bari ee Puntland.
2013kii Obama ayaa saxiixay wareegto fareysa ka hor inta aan weerar laga fulin Soomaaliya in la war geliyo Aqalka Cad ee Mareykanka,kaddibna la oggolaado weerarkaas kaddibna la fuliyo.
Weerarrada ugu badan ee Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya ayuu xoogga ku saarayay Al-shabaab,waxaana Trump maamulkiisa ku cusub kuwa ka dhanka ah Daacish oo dhinaca Buuraleyda Bariga Soomaaliya ka dagaallanta.
Sawirro:-Afar Ruux Iyo Qaraxyo Lagu Soo Qabtay Howlgal Laga Fuliyay Muqdisho